नवजात शिशुमा यी समस्या जन्मजात आउन सक्छन् | Ratopati
नवजात शिशुमा यी समस्या जन्मजात आउन सक्छन्
वरिष्ठ बाल शल्यचिकित्सक (पेडियाट्रिक सर्जन) प्राडा रामनन्दप्रसाद चौधरीसँग अन्तरवार्ता
personअञ्जु तामाङ exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर १८, २०७६ chat_bubble_outline0
आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले ओगटेका छन् । तर ती बालबालिकाको स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने अझैसम्म सरकार तथा निजी क्षेत्र गम्भीर भएको पाइँदैन । अहिलेसम्म कान्ति बाल अस्पतालले मात्र बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई धान्दै आइरहेको छ भने केही निजी अस्पताल सञ्चालनमा छन्, ती पनि काठमाडौँ केन्द्रित छन् ।
नेपालमा बाल शल्य चिकित्सकको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने जम्मा २५ जना मात्रै छन् । तीमध्ये २२ जना त उपत्यकामै छन् । अन्य ३ जना केही मुख्य सहरमा छन् । निजी क्षेत्रलाई बालबालिकाको उपचारका लागि अस्पताल सञ्चालनमा सहयोग गर्ने सरकारको भनाइ छ ।
बालबालिकामा जन्मजात आउने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या थपिँदै गइरहेको छ भने जन्मपछि पनि उत्तिकै समस्या बढ्दो अवस्थामा छ ।
बालबालिकाको स्वास्थ्यमा जन्मजात आउने समस्या, यसको उपचार, रोकथाम र नेपालमा बाल शल्य चिकित्सकको अवस्था र सरकारको जिम्मेवारीका विषयमा हामीले वरिष्ठ बाल शल्य चिकित्सक (पेडियाट्रिक सर्जन) प्राडा रामनन्दप्रसाद चौधरीसँग कुराकानी गरेका छौँ । लामो समयदेखि कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ प्राडा चौधरी अवकासपछि हाल इसान बाल तथा महिला अस्पतालका निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । उनी विगत २५ वर्षदेखि बाल शल्य चिकित्सकको जिम्मेवारीमा छन् ।
पेडियाट्रिक सर्जरी भनेको के हो ?
नवजात शिशुदेखि १८ वर्ष उमेरसम्मको बालबालिकामा गरिने सर्जरीलाई पेडियाट्रिक सर्जरी भनिन्छ । नवजात शिशु जन्मनुभन्दा पहिले आमाको गर्भ अवस्थाको विषय पनि पेडियाट्रिक सर्जरीमा पर्छ ।
पहिला बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या भए पनि ढिला अस्पताल आउँथे भने अहिले समयमै आउन थालेका छन् । गर्भावस्थामा शिशुमा केही समस्या देखिएको खण्डमा समस्याबारे बताउने र भोलि राम्रो हुन्छ हुँदैन अथवा शिशु राख्नु उपयुक्त छ÷छैन भन्ने बारेमा चिकित्सकसँग परामर्श लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ, जुन राम्रो पक्ष हो ।
सर्जरीको कुरा गर्ने हो भने नवजात शिशुमा जन्मजात धेरै समस्याहरु देखा पर्छन्, जसको तत्काल उपचार तथा सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्द्रा बाहिर निस्केको, नाइटो फुट्ने, हर्निया, खाने नली फोक्सोतिर जाने, खाने नली र श्वास नली जोडिएको, बच्चामा बच्चा जोडिएको, मूत्रनलीमा समस्या आउने जन्मजात शिशुमा देखापर्ने समस्या हुन् । साथै शिशु जन्मेपछि छोरा हो कि छोरी छुट्याउनै समस्या हुने, मिर्गाैलामा पानी जम्ने, पिसाब फेर्ने प्वाल सही ठाउँमा नभएको समस्याहरु पनि बालबालिकामा देखापर्ने गरेको छ । यी समस्याको तत्काल उपचार भएन भने शिशुमा झन् समस्या देखिन पनि सक्छ ।
नियमित महिनावारी नभएपछि गर्भ रहेको हो कि भनेर अनुमान गरिन्छ । जब गर्भ रहेको थाहा हुन्छ, त्यो समयमा ७ देखि ८ हप्ताको गर्भ भइसकेको हुन्छ । नवजात शिशुमा यस्तो समस्या आउनुको एउटा मात्रै कारण हुँदैन, विभिन्न कारणहरु हुन्छन् । यही कारणले यस्तो समस्या आउँछ भन्न सकिन्न । गर्भ रहेको पहिलो १२ हप्तासम्म एकदमै सेन्सेटिभ हुन्छ । त्यो समयमा भ्रुणबाट विभिन्न भागहरु बन्न थाल्छ ।
शिशुमा जन्मजात समस्या आउनुको प्रमुख कारण के–के हुनसक्छन् ?
नेपालमा सन्तान जन्माउनका लागि खासै पूर्वतयारी गरिन्न, जुन कुराको धेरै आवश्यक छ । पूर्वतयारी गर्ने, स्त्रीरोग विशेषज्ञको परामर्श लिने हो भने जन्मने नवजात शिशुमा समस्या नआउन सक्छ । तर नेपालमा धेरैजसोको अचानक गर्भ रहँदै आइरहेको छ ।
यो समयमा रेडियसन, लागू पदार्थ, मद्यपान धूमपानले धेरै असर गर्ने हुँदा यस्ता कुराबाट टाढै बस्दा राम्रो हुन्छ । नियमित रूपमा भ्रुणको विकास भइरहेको बेलामा बीचमा कुनै अवरोध भयो, जस्तै आन्द्राको नसा बन्ना साथ माथिबाट सर्दैसर्दै दिसाको प्वालसम्म जानुपर्यो तर कुनै ठाउँमा रोकियो भने आन्द्राको नसाको कमी हुन्छ । त्यस्तै दिसाको प्वाल अन्तिममा गएर खुल्छ तर त्यो कुनै कारणवस खुलेन भने दिसाको प्वाल बन्दैन ।
शिशु जन्मने बित्तिकै तत्काल सल्यक्रिया कुन अवस्थामा गर्नुपर्छ ?
शिशु स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको छ भने त्यहाँको बाल रोग विशेषज्ञले हेर्नुहुन्छ र समस्या भए नभएको बारेमा जानकारी हुन्छ । समस्या छ भने समयमै पत्ता लाग्छ र उपचार हुन्छ । शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने अवस्था भने दिसाको प्वाल नभएको, जन्मेको बच्चाको आन्द्रा पेटमा नभएर नाइटोमा प्वाल परेर आन्द्रा बाहिर निस्कने समस्याहरु पनि हुन्छन् । शिशु जन्मनुभन्दा पहिला नै भिडियो एक्सरे गरेको छ भने गर्भमै थाहा पाउन सकिन्छ, जन्मेपछि पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।
नवजात शिशुमा जण्डिस पनि देखिँदै आइरहेको छ । शिशुमा ४ देखि ६ हप्तासम्म जण्डिस भएको छ भने पित्तको नली सुक्ने बित्तिकै आन्द्रामा पित्त जान पाउँदैन, जसले गर्दा कलेजोमा समस्या आउँछ । ओठ राम्रोसँग नजोडेका लगायत माथि उल्लेखित समस्याको सक्दो छिटो सर्जरी गर्दा राम्रो हुन्छ ।
बालकमा जन्मने बित्तिकै पिसाब गर्दा धेरै परसम्म पिसाब फाल्ने, पिसाब फेर्दा कन्ने अथवा नजिकै तुरुक तुरुक पिसाब फाल्ले गरेको छ भने पिसाबको बाटोमा पर्दाहरु हुन सक्ने र त्यस्तो बालकको मिर्गाैलामा पानी जमेको समस्या पनि हुन सक्छ । नवजात शिशुले हरियो बान्ता गरेको छ भने कहीँ न कहीँ आन्द्रा अड्किएको अथवा किटाणुको सङ्क्रमणले पनि त्यस्तो हुन सक्छ ।
यस्ता समस्याहरु एक पटकको सर्जरीबाट निको हुन्छ ?
बालबालिकामा देखिने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरु धेरैजसो कम आर्थिक अवस्था भएका र अशिक्षित भएकोमा पाइन्छ । रोग सबैलाई लाग्न सक्छ तर बढी सम्भावना यस्ता परिवारबाट जन्मेका शिशु जसको आमाले गर्भावस्थामा खानपान, स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिएको हुँदैन । दिसा गर्ने प्वाल, आन्द्रामा नसाको कमी भएको, पिसाबको बाटोमा पर्दा भएको, मिर्गाैलामा पानी जमेको समस्याको कसैलाई एक पटकको सर्जरीले निको हुन्छ भने कसैलाई पटक पटक सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ ।
गर्भको शिशुमा समस्या भए नभएको बारेमा जानकारी पाउने मुख्य समय भनेको १८ देखि २० हप्ता हो । त्यो समयमा अल्ट्रासाउन्ड गरेर अथवा अन्य प्राविधिक विधिमार्फत पनि गर्भको शिशुको अवस्थाबारे जानकारी पाउन सकिन्छ । गर्भको शिशुमा केही समस्या छ भने आमाको गर्भलाई खोलेर शिशुको सर्जरी पनि गर्न सकिन्छ जसलाई फिटल सर्जरी भनिन्छ । यस्ता किसिमको सर्जरी मैले अमेरिकामा हेर्ने मौका पाएको थिएँ । तर त्यो सेवाको नेपालमा भने सम्भव छैन ।
सबैको आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदैन । यस्तो समस्या भएका बालबालिकाको पटक पटक सर्जरी गर्दा आर्थिक अभावका कारणले कतिपय अविभावकले शिशुलाई आधा उपचार गरेर पनि घर लाने गरेका छन् । यो हाम्रा लागि पीडादायक कुरा हो ।
उपचार गराउने स्वास्थ्य संस्था अथवा व्यक्तिले पनि बिरामीका यस्तो समस्यालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सर्जरी गरेर निको हुनेका लागि खासै समस्या नभए पनि पटक पटक सर्जरी गर्नुपर्नेहरु आर्थिक अवस्थाकै कारणले गर्दा उपचारबाट वञ्चित हुन बाध्य छन् । एउटा बच्चाको उपचारमै धेरै पैसा लाग्ने हो भने अन्य बालबालिकालाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा गर्छन् र पूरा उपचार नगरी घरमा लिएर जाने धेरै केसहरु मैले भोगेको छु ।
गर्भ रहेको कति हप्तामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा शिशुमा समस्या भए नभएको बारे जानकारी पाउन सकिन्छ ?
नेपालमा बाल शल्य चिकित्सकको अवस्था कस्तो पाउनु हुन्छ ?
२५ वर्ष पहिला नेपालमा अध्ययन गरेर आउँदा म चौथो पेडियाट्रिक सर्जन थिएँ । अहिले २५ जना जति नेपालमा पेडियाट्रिक सर्जन छन् । तर दुर्भाग्य के छ भने २५ जनामध्ये २२ जना काठमाडौँ उपत्यकामै छन् । बाँकी एक जना धरान, एकजना बुटवल र एकजना वीरगञ्जमा छन् । पहिला पनि हरेक कुरा काठमाडौँ केन्द्रित थिए भने अझैसम्म पनि यो क्रम रोकिएको छैन ।
म कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको छलफलमा बालबालिकाको स्वास्थ्यको बारेमा के गर्ने भन्ने सवालमा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ । ५ वटा विकास क्षेत्रमा कम्तीमा पनि एक एकवटा बालबालिकासम्बन्धी अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने मेरो कुरा थियो तर त्यो पनि लागू भएन । अहिले ७ वटा प्रदेश छन्, हरेक प्रदेशमा सरकारी स्तरको बाल अस्पताल हुनै पर्छ । कान्ति बाल अस्पताल नेपालको एक मात्र बाल अस्पताल हो । त्यसमा पनि पेडियाट्रिक सर्जरीको त एउटा मात्रै विभाग छ ।
नेपालका सबै ठाउँमा बाल शल्य चिकित्सक छैनन् । जसले गर्दा समयमा उपचार पाउनबाट बालबालिका वञ्चित भएका छन् ।
अहिले नेपाल सरकारले आफ्नो सरकारी अस्पताल नबनाई निजी क्षेत्रलाई अस्पताल बनाउन सहयोग गर्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । यसरी सरकार पन्छिन पाउँदैन । जुन देशमा ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या १८ वर्षका (पेडियाट्रिक पपुलेसन) छन् । ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सरकारले इग्नोर गर्न मिल्छ ?
सरकारी स्तरको सबै प्रदेशमा एक एकवटा अस्पताल हुनुपर्छ । पछि एनजीओ, आईएनजीओ जो कसैलाई सहयोग गरे पनि कुनै फरक पर्दैन । तर गरिब, विपन्न बालबालिकाले उपचार पाउने अस्पताल भनेकै सरकारी अस्पताल हो । त्यसैले बालबालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन्, स्वस्थ्य बालबालिका छन् भने स्वस्थ्य नेपाल बन्छ । देशलाई सेवा उनीहरुले नै हो गर्ने ।
२५ जना पेडियाट्रिक सर्जनमध्ये २२ जना काठमाडौँ उपत्यकामा छन् भनेपछि बालबालिकामा देखिएको समस्या बोकेर उपत्यकामै धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ?
कम्तीमा सबै प्रदेशमा एक, एक बालबालिकाको उपचारका लागि अस्पताल हुनै पर्छ । बाल शल्य चिकित्सक मात्रै भएर हुँदैन, बालबालिकाको उपचारका लागि छुट्टै अध्ययन गरेका नर्स पनि हुनुपर्छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि विभिन्न विभागको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
बालबालिकामा जन्मजात देखिने समस्या समाधानका लागि केके कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
शिशु जन्माउनुभन्दा पहिला स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिँदा राम्रो हुन्छ । शिशु जन्माउने तयारीमा हो भने श्रीमान श्रीमती दुवै जनाले खान नहुने कुराहरु जस्तै धूमपान मद्यपान, अनावश्यक औषधिहरु खानु हुँदैन । गर्भ अवस्थामा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । समयमा अल्ट्रासाउन्ड गराउने, सुत्केरी घरमा भन्दा पनि स्वास्थ्य संस्थामै गराउँदा आमा र शिशु दुवै जनाका लागि राम्रो हुन्छ । आमा र शिशुमा थप समस्या देखेको खण्डमा थप उपचारका लागि अन्य अस्पतालमा पठाउन सकिन्छ । समयमै यी कुरालाई ध्यान दिने हो भने स्वस्थ्य जीवन जिउन सकिन्छ ।